Chandon Brut Sparkling Wine ~ ICT.com.mm
HomeChandon Brut Sparkling Wine
Chandon Brut Champagne Blend Alcohol: 12.5% Brut/ NV Yarra Valley/ Australia Tasting Notes Pale straw with green hues in color. Bright and fresh aromas of apple sorbet, orchard blossoms and lemon. Gently... [Learn more]
Brand: CHANDONFilter by: FWM, Wine
Yarra Valley/ Australia
Pale straw with green hues in color. Bright and fresh aromas of apple sorbet, orchard blossoms and lemon. Gently creamy texture, zesty acidity and refreshing finish.
Suitable with shellfish such as crab or lobster. It also enhances the flavors of fish or poultry dishes, and is an excellent match with goat cheese, mild double or triple cream cheeses.
ဩစတေးလျနိုင်ငံမှ ထုတ်လုပ်တဲ့ Chandon အမှတ်တံဆိပ် Brut Sparkling Wine ဖြစ်ပါတယ်။ Champagne Blend အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဩစတေးလျနိုင်ငံ၊ Yarra Valley မှာပေါက်ရောက်တဲ့ Chardonnay, Meunier နဲ့ Pinot Noir စပျစ်သီးတွေကို ကုန်ကြမ်းအဖြစ် ရောစပ်အသုံးပြုထားပါတယ်။ Alcohol ပါဝင်မှု 12.5% ရှိပြီး Sweet/Dryness Level က Brut Level ဖြစ်ပါတယ်။ Non Vintage ဖြစ်တဲ့အတွက် အသီးသီးနှစ်မတူညီတဲ့ စပျစ်သီးတွေကို စနစ်တကျရောစပ်ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ Sparkling ဝိုင် အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခွံမာ Shellfish တွေဖြစ်တဲ့ ပင်လယ်ကဏန်း၊ ပုစွန်တုပ် ဟင်းလျာတွေနဲ့ တွဲဖက်သုံးဆောင်ဖို့ သင့်တော်တဲ့ ဝိုင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ငါး သို့မဟုတ် ကြက်၊ ဘဲ ဟင်းလျာတွေရဲ့ အနံ့အရသာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသလို ဒိန်ခဲအမျိုးမျိုးနဲ့လည်း လိုက်ဖက်တဲ့ ဝိုင်အမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။